Rafitra Horeb : famokarana manome andraikitra ny orinasa | NewsMada
Manohana ny tantsaha mpamokatra ny orinasa mpandray ny vokatra, amin’ny alalan’ilay rafitra Horeb. Tanjona ny hananana vokatra manara-penitra sady mitsinjo ny tontolo iainana.
Nanao famelabelaran-kevitra mikasika ny rafitra Horeb ny mpandraharaha Rasamimanana Faly, mpandraharaha, sy ny teknisianina amin’ny Andraikitry ny orinasa amin’ny famokarana na Responsabilité societale des entreprises (RSE), Randriamaniraka Michael, ny herinandro lasa teo.
Miara-miasa akaiky amin’ny tantsaha ny orinasa Faly export, tantanan-dRasamimanana Faly any Toamasina, indrindra any amin’ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo. Tena ifantohan’izy ireo ny seha-pamokarana mampandroso sy ny vokatra ara-pambolena fanondrana any ivelany. Manaraka ny fenitry ny RSE ny rafitra Horeb, mifototra amin’ny lafin-javatra efatra: ny fahadiovana, ny fitantanana mirindra, ny fanarenana ny tontolo iainana sy ny tontolo mananaina.
Nambaran-dRasamimanana Faly, ampiharina amin’ny fiainana andavanandron’ny tantsaha mihitsy ny RSE fa tsy amin’ny fomba famokarana ihany. Tanjona ny hananana fahazarana tsara amin’ny fiainana ary miantraika any amin’ny fomba famokarana. Ezahinay ny manabe ny maha olom-pirenena ho an’ny tantsaha malagasy rehetra, ary hanana ny toerany amin’ny fanondranana vokatra any ivelany.
Hanohanana ny tantsaha ny 50%-n’ny tombombarotra
Ho an’ny rafitra Horeb, hatokan’ny orinasa hanohanana ny tantsaha mpamboly madinika ny 50%-n’ny tombombarotra any Analanjirofo sy Atsinanana. Hoentina hividianana fitaovam-pamokarana, tranon-tantely, sns. Tena ataon’izy ireo ny fambolena voankazo, karazan-tsakay sy hanitra ary voamaina.
“Anisan’ny fepetra ahazoana ny tohana avy amin’ny Horeb ny faneken’ny tantsaha tsy manao ny fambolena amin’ny fanaovana tavy”, hoy Rasamimanana Faly. Misy ny foibe natsangana any Toamasina hampiofana ny tantsaha mikasika ny Horeb.
Ilaina ny fientanan’ny mpisehatra rehetra mba hitondra fampandrosoana maharitra ara-toekarena sy ara-tsosialy araka ny voafaritry ny Tanjona hitondra fampandrosoana maharitra (ODD) sy mifanandrify amin’ny Fifanarahana Cop 21 natao tany Paris ny taona 2015 teo.
Nilaza Randriamaniraka Michael fa “hamafisina ny ezaka hamaliana ny filàn’ny tsena iraisam-pirenena, indrindra ny any Eoropa sy Etazonia. Ao anatin’izany ny lafiny fahadiovana, kalitao, fiarovana ny famokarana sy fitsinjovana ny tontolo iainana. Ampiarahina ny fitsipiky ny RSE sy ny zava-misy isan-paritra eto Madagasikara, mba hitondra vokan-tsoa sy tena fandrosoana”.